Measurement | Reef Resilience
Dingana 6: Mamaritra ny fiantraikany
Ny fanamarinana dia hampiseho anao raha mila miova na fanitsiana ianao mba hahatratrarana ny tanjonao sy rehefa (na raha) nahatratra ny tanjonao ianao.
Jereo ny famelabelarana fohy momba ny famakiana ny fiantraikao:
Rahoviana no hisaina?
Ny fametrahana dia tokony hanomboka alohan'ny hampiharana ny paikady fifandraisana. Ny vaovao mahafaly dia ny fametrahana fepetra voalohany ao amin'ny Dingana 2 sy 3 raha nanombantombanana ny hevitrao ianao ary nanomboka nandinika ny mpihaino anao. Ireo antontan-kevitra voalohany dia mety ho toy ny fanombohana anao - izay zava-dehibe satria tsy azonao atao ny mamaritra ny fiafaranao raha tsy fantatrao izay nanombohanao.
Aza miandry mandra-pahatapitry ny tetikasanao hanangona sy hijerena antontan'isa. Ny fanangonana ny angon-drakitra rehefa mandeha dia hanampy anao hianatra izay asa sy izay tsy, ka azonao atao ny mamerina manova ny fomba fiasanao araka izay ilaina. Raha toa ka tsy miasa ny tetikadinao amin'ny fanatrehana mpihaino iray miaraka amin'ny hafatra sy ny fandraisana azy ireo, dia vao haingana ianao no afaka manao fiovana mba hahafahanao manatratra ny tanjonao.
Tokony ho farafaharatsiny indray mandeha ianao, manomboka eo amin'ny tapatapak'alina, amin'ny alàlan'ny tetikasa momba ny tetikasa, ary avy eo amin'ny farany. Ny fandrefesana fandaharam-potoana dia mety hanosika koa hizara amin'ny olona manodidina anao, toy ny mpiasa sy ny mpirotsaka an-tsitrapo, miaraka amin'ny mpihaino izay mpanohana, ary miaraka amin'ny mpitantana, ny mpamatsy, na ny mpiara-miasa hafa. Ny fiheverana ny vokatr'ilay tetikasa, na dia tsy vitanao aza ny tanjonao, dia hanampy amin'ny fanatsarana ny tetikasa ho avy, ary ahafahanao mampiasa loharanom-bola voafetra kokoa amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny manaraka.
Rehefa mieritreritra izay tokony handrefesana dia mandinika:
Nahatratra ny mpihaino anao ve ny hafatrao? Firy ny isan'ny mpihaino anao azonao?
Namaly ny hafatrao ve ny mpihaino anao? Raha tsy izany, mila manova ve ny hafatrao?
Ahoana no niovan'ny fihetsik'ireo mpihaino anao?
Niova fo ve ianao na nanamboatra fifandraisana vaovao?
Efa vitanao ve ny tanjonao ary inona no fantatrao?
Ohatrinona ny vola laninao, ary inona no vokatra azo?
Raha nampiasa tetika ianao voalohany, ahoana no nahavitan'izy io? Mbola hampiasa izany indray ve ianao? Hanova azy io?
Raha nanao fampiasam-bola manan-danja amin'ny tetika anankiray ianao, ahoana no nahatanterahan'izany? Azonao hamarinina ve raha sarobidy ny fampiasam-bola?
Outputs no zavatra ataonao - hetsika ataonao - hampandroso ny paikadinao. Ohatra, raha mamporisika ny olona ianao hividy sy hampiasa vokatra tokotanin-tsambo izay tsy dia manimba ny ranomasina ary manamboatra vokatra mifatotra hampandrenesana ny mpanjifa izay vokatra hovidiana, ny vokatra iray azo avy amin'ny tetikasa dia azo antsoina hoe "zaridaina miisa 1,000 XNUMX '' Preferred Ocean '." Raha mampiantrano hetsika ianao dia azonao atao ny manara-maso ny isan'ny olona nanatrika na ny isan'ny brochures natolotra.
vokatra dia ireo fiovana mitranga noho ny ezaka ataonao, toy ny fiovan'ny saina, fihetsika, na fihetsika, na politika vaovao na lalàna. Ohatra, "namidin'ireo tavoahangy 1,000 'Ocean Preferred'.
Ny ankamaroan'ny vokatra dia mora mazàna ary matetika quantifiable - zavatra izay azo isaina. Ny vokatra dia mety tsy voatery ho azo atao, fa mety anecdotal, toy ny fanamarihana manokana na tantara. Ohatra iray amin'izany ny teny notsongaina avy amin'ny mpanjifa fivarotana enta-mavesatra nizara ny fomba nitaoman'ireo taratasy fametaka tian-dranomasina ny fihetsik'izy ireo: “Niady hevitra momba izay zezika hovidiana aho ary nahatsikaritra sticker iray namaky hoe 'Ocean Preferred. Io no antony nanapahako hevitra tamin'ny fividianako. ”
Ny fampahalalana anekdotal dia mahery amin'ny fitantaràna tantara iray, ary rehefa ampiasaina miaraka amin'ny isa sy stats dia mahatonga ny vokatr'ilay tetikasa ho azo atao, mampiseho ny tarehiny ao ambadiky ny isa.
Miharatsy ny vokatr'izany. Azonao atao ny mamaritra ny vokatra rehefa mihemotra ny tanjonao. Ohatra, raha ny tanjonao dia ny hitarika ny olona tsy handratra, dia azonao atao ny mamaritra ny habetsaky ny fako eny amoron-dranomasina isam-bolana alohan'ny hanombohan'ny tetikasa, ary alaivo ny sombin-tsigara mandritra ny fotoana fohy ary aorian'izay mba hahitana raha nihena ny habetsaky ny fako.
Ny tetikady iray izay mifangaro ny vokatra sy ny fepetra azo atao, izay azo zaraina sy ny anecdotal, dia mety hitondra valiny mazava sy mandresy lahatra.
Ny anjaranao (> voatondro 20 minitra)
mampiasa ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTactics Worksheetmanokatra fisie PDF , soraty ny karazana fepetra hampiasainao hamaritana ny paikadinao. Raha toa ianao ka tsy mahavita tetikady, dia mariho izany.
Rehefa avy nameno ny taratasy ianao, dia avereno dinihina ny lisitr'ireo fepetra. Ho an'ireo tetikady tsy azo refesina, maha-zava-dehibe ve izy ireo hahatratra ny tanjonao? Raha toa ka tsy manan-danja izy ireo ary tsy azo refesina, dia mety ho tapaka amin'ny drafitra izy ireo. (Diniho ny loharano raha azo atao!)
Manapaha hevitra raha mety hokapaina ny taktika.
Haneho ny vokatrao sy ny vokatrao ve ianao raha nanao fandrosoana ianao tamin'ny fanatanterahana ny tanjonao? Manana fepetra azonao isaina ve ianao?
Misy tahirin-kevitra azo jerena ve ireo refy ireo?
Heverinao ve ny fitaovana an-tserasera maimaim-poana toy ny fanarahamaso Facebook na Google Analytics?
Moa ve ianao nampiditra fepetra hanangona valim-panafody, toy ny fanadihadiana tsy ara-potoana?
Moa ve ny fandrefesanao ny fifangaroan'ny vokatra sy ny vokatra, izay azo isaina sy ny anecdotal?
Moa ve efa misy famerana izay azo jerena mandritra ny ezaka ataonao amin'ny fifandraisana, fa tsy amin'ny farany ihany?
Mandehana any amin'ny Dingana 7: Mamoròna famintinana ny drafitra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoA Guide Evaluation Communications
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRahoviana ny fampiasana ny fikarohana kalitao sy quantitative amin'ny Campaign Communicationsmanokatra fisie PDF